House na Holmsjön | 7773033.ru - 7773033.ru
Nice ezumike ụlọ ezi ụkpụrụ na-emi odude 50 m Holmsjön na bath- na angling. Large ndịda-eche ihu jakị. Echiche nke ọdọ na oké ọhịa, ị nwere na gị n'ọnụ ụzọ. Large ọtụtụ ahihia ntekwasa ebupụta, iri eghu, ubi ngwá ụlọ. nwa enyi na enyi! Ịkwọ ụgbọ epeepe ụgbọ mmiri dị gbaziri. Anụ Mmịkpọ ụlọ ọrụ na-ala na Holmsjön. E nwere ezi ihe mkpuchi na GSM na 3G netwọk. ọ bụ ike ka na-atụ mail na akwụkwọ akụkọ n'oge ezumike izu.
Lee foto dị n'okpuru ebe!
Anu ulo: kwere
price: 2000 / izu
Large map na ntụziaka.
foto (pịa oyiyi na-ele ibu size)